कसरि एक वर्चुअलाइजेशन प्रो बनें - यसको टेक स्कूल
कैसे एक वर्चुअलाइजेशन प्रो बनने को
एक वर्चुअलाइजेशन प्रो बनें
1। सुरूवात सुरू गर्नुहोस्।
2। सानो सुरू गर्नुहोस्।
3। प्लेटफार्म छान्नुहोस् र यसलाई मास्टर गर्नुहोस्।
4। यसलाई अर्को स्तरमा लिनुहोस्।
भर्चुअलकरण व्यवसाय हालैको मेमोरीमा कुनै पनि अन्य समय भन्दा बढी छिटो विकास हुँदैछ। यस निरन्तर प्रगतिशील ट्रयाक संग, तपाईं आफ्नो टाउको वरिपरि लुगा लगाउने नयाँ विचार र विचारहरू छन्।
त्यहाँका एकजना भित्तामा रमाईलो लागेकी थिईन। उनीहरु एकैछिनमा बस्थे। हामी चार सरल स्ट्रिङहरू आउट गर्छौं जुन तपाईं आफ्नो कौशल निर्माण गर्न र एक भर्चुअलकरण मास्टरमा परिवर्तन गर्न सुरु गर्न सक्नुहुनेछ।
अन्तिम लक्ष्यलाई ध्यानपूर्वक राख्नु एक भर्चुअल एसिअशन समाप्त गर्न को लागी, तपाईसँग अन्य आईटी डिजाईनहरूको बारेमा जान्नैपर्दछ, शुरुवात सर्भर संगठन संग। एक मौलिक सेटअप धेरै अनुरोध गर्नुहुन्न, तैपनि तपाईं बढ्दो वर्चुअल ढाँचा बाहिर काम गर्दा, चीजहरू एकदमै जटिल हुन्छन्। तपाइँ लिन चाहानुहुन्छ लिनक्स शुल्कहरू पुन: चयन गर्न युद्ध वा कसरी बूट हुने छैन विन्डोज सर्भर व्यवस्थित गर्न। प्रशासक खरिदहरूमा ऊर्जा लगानी गर्नुहोस् तपाईले असाधारण लाभ उठाउनुहुनेछ।
सञ्जाल, विशेष गरी, त्यसैगरी पोरी पाउन सक्छ। तपाईंको कम्पिएडिया नेटवर्क + प्रशिक्षणले तपाईंलाई सल्लाह दिनेछ कि एक राम्रो तरिकाले बनाएको भर्चुअल वातावरणमा केहि VLANs र subnets सँग खण्ड बाहिर, तपाईंको भौतिक होस्टहरूको लागि व्यवस्थापन सञ्जाल चलिरहेको छ, र साझेदारी भण्डारणसँग बोल्ने क्षमता नेटवर्क, र तपाईंको लागि विभिन्न नेटवर्कहरू पनि हुनेछ। भर्चुअल सर्वरहरूको रूपमा सुरक्षाको लागि आवश्यक छ। बन्द मौकामा हामी हामी VLANS को विचार छोड्छौं, तपाइँसँग प्रत्येक सञ्जालका प्रत्येक सर्भरमा केहि भौतिक पोर्टहरू छन्, सबैसँग होस्टमा र स्विच दुवैमा सही डिजाइन गरिएको हुनुपर्छ, वा पत्राचार घटाइनेछैन।
त्यस समयमा सबै चीजहरू3मा यी रेखाहरूसँग मिल्दछ, तपाइँसँग राम्रोसँग नेटवर्किङमा केही बलियो क्षमताहरू छन्।
एक पुरानो डेमिमेन्सन सर्भर वरिपरि लुगा लगाइयो? उपभोग गर्नुहोस्! Dilly dally र एक मुक्त फारम VMware वा माइक्रोसफ्ट हाइपर-वी स्ट्याक गर्नुहोस्।
तपाईं कसरी सोध्नुहुन्छ? हामी बोल्दै छैनौँ। यसको अर्थ बनाउनुहोस्।
ओमान, तपाईं आईटी सोसाइटी हुनुहुन्छ / महिला हुनुहुन्छ, तपाईं टिंकर बस्नुहुन्छ र नयाँ सामानको अर्थ बनाउनुहुन्छ! यसबाहेक, यसले सात दिनको ब्लग प्रविष्टिहरू पूर्णतया आवरण गर्न सक्दछ। बाधाहरू र क्रिप्टिक ब्लन्डरहरू हट्नेछ, त्यसैले तपाईले सिक्नु हुने मुख्य तरिका र होशियार छोड्नुहोस् यसलाई हानिकारक छ।
एकपटक भएपछि तपाईले एक स्यान्डबक्स पाउनुहुनेछ जहाँ तपाईं खेल्न सक्नुहुन्छ। एक विन्डोज सर्भर निर्माण गर्नुहोस्, यसलाई स्पेस नियन्त्रक बनाउनुहोस्, अफिस कुक चित्रका लागि आईआईएस सर्भर समावेश गर्नुहोस्, लिनक्स बक्स समावेश गर्नुहोस् र सँगै प्ले गर्नको लागि कुनै सनोजल अनुप्रयोग परिचय गर्नुहोस्। केवल तपाईंको सिर्जना सञ्जालसँग पहिचान गरिएको कुनै पनि चीज नगर्नुहोस्। ध्यान राख्नुहोस्, यो गडबडी हो, 12-वर्षीय सर्भरले दुई फ्रिज सर्कलहरू र मनमाने रिबूटहरूको एक जनावर उदाहरणको साथ।
हामीले पहिले VMware र हाइपर-वी भन्नुभयो। दुवै हाइपरवाइजरहरू हुन्, त्यस उत्पादन तह जसले वास्तवमा तपाईंको भौतिक होस्टको CPU, RAM, र ती आस्तित्वहरू प्रयोग गर्न भर्चुअल मशीनहरू सक्षम गर्न क्षमतालाई सारिन्छन्। त्यहाँ धेरै प्रकारका हाइपरवाइजरहरू पहुँचयोग्य छन्, दुई सबैभन्दा प्रमुखहरू VMware को vSphere र माइक्रोसफ्टको हाइपर-वी हो।
दुबै वस्तुहरू अत्यन्तै विकासशील छन् र साथसाथै, समग्र उद्योगको टुक्रा भन्दा धेरै भन्दा बढी छ। गुणस्तरको शिक्षा दुवै, तैपनि तपाईंले एक जना प्राधिकरणलाई एक चरणमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। त्यसोभए कि तपाइँ माइक्रोसफ्टको पसल चलाउनुहुन्छ, हाइपर-V एक अपरिहार्य निर्णय हो, विशेष गरी आधारमा यो 2008 पछि Windows Server को प्रत्येक प्रतिपादन संग मानक हुन्छ। बन्द मौकामा तपाइँसँग कुनै पनि लिनक्स सर्भरहरू छन् वा गैर-माइक्रोसफ्ट वस्तुहरूमा रूचि राख्नुहुन्छ त्यसपछि vSphere हेर्नुहोस्।
कुनै पनि अवस्थामा, CBT Nuggets तपाईं सबै प्रशिक्षण आवश्यकताहरू को लागि सुरक्षित छ। माइक्रोसफ्टले Hyper-V लाई पूर्णतया यसको MCSA र MCSE सर्भर ट्र्याक पुष्टिकरणमा समावेश गर्दछ, र VMware को VCP-DCV मान्यता vSphere मा गहिरो घेरा हो।
तपाईंले कौशल, चरण र सिरेन्स पाउनुभयो, त्यसैले तपाईं भर्चुअललाइजेसन प्रतिभामा बदल्न आफ्नो दृष्टिकोणमा राम्रो हुनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो भर्चुअल ढाँचा बन्नु भएको रूपमा, तपाईंको हाइपरवाइजरको सबैभन्दा ठूलो कुञ्जी प्रयोग हुनेछ उच्च पहुँच। यसले एक भौतिक होस्टसँग सुरु हुने वर्चुअल मशीनहरूको असफलता प्रोग्राममा लिन्छ त्यसपछि अर्कोमा जब विच्छेदन गरिन्छ।
तथापि भरपर्दो लागत हो, र यो अनावश्यक हार्डवेयरको साथ सुरु हुन्छ। थप खर्च, जाहिर छ, उच्च अप भन्दा आवश्यकमा बढी खरिद हुन्छ। यस बिंदुमा, तपाइँ यी प्रगतिहरूको संरक्षण गर्न र कसरी लागत र डाउनटाइम कम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जानकार हुनु पर्छ, हार्डवेयर निराशा र मौलिक आधारबाट।
वर्चुअलाइजेशनले यो आईटी सँधै परिवर्तन गरेको छ र सम्भवत रूपमा तपाइँको स्थानलाई अनिवार्य रुपमा मद्दत गर्न सक्छ। यदि तपाईं अहिले भर्चुअल वातावरणसँग व्यवहार गरिरहनु भएको छैन भने, यो तपाईंसँग निर्भर रहनु र सिक्न प्रयास र जीवनशैलीको निवेश गर्नका लागि निर्भर हुनुहुन्छ, किनकि यी सबै आईटी प्रविधिहरूको लागि मानक चार्ज बन्द भएका छन्।
VMware प्रमाणीकरण बारे7अद्भुत प्रशिक्षणहरू